किन मनाउने होली ? रंग कसरी हटाउने ? त्याे पनि सिकाैँ - Sabal Post
किन मनाउने होली ? रंग कसरी हटाउने ? त्याे पनि सिकाैँ
होली मनाउने मुडमा हुनुहुन्छ ? निश्चय पनि बर्षदिनमा एकपटक रंगहरुको उत्सव मनाउने मौका उम्कन दिने पक्षमा हुनुहुन्न । त्यसो हो भने, कसरी होली मनाउँदै हुनुहुन्छ त ?तपाईं वेपर्वाहसँग भन्नुहोला, ‘विगतमा जसरी मनाइएको थियो, ठिक त्यसैगरी । अविर दल्ने, लोला छ्याप्ने । थोरबहुत नसालु पेय पिउने । विन्दास रंगहरुमा रमाउने ।’अब तपाईंसँग अर्को प्रश्नको पनि जवाफ हुनुपर्छ । होली किन मनाउँदै हुनुहुन्छ ?यसको रेडिमेड जवाफ यस्तो हुनसक्छ, ‘चाडपर्व, संस्कृति हो । त्यसैलाई निरन्तरता दिनका लागि ।’ अर्थात तपाईंले होली मनाउनुको ध्येय परम्पराको निरन्तता हो । कुनैपनि पर्व, उत्सव किन र कसरी मनाउने भन्ने कुरा तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत रुचीको विषय हुन् । यसमा कुनै सर्तहरु लागु हुनेछैन । यद्यपी यी चाडपर्वको मर्म, महत्व र महिमालाई बुझ्नुभयो भने तपाईंले थप आनन्दाभूत गर्नुहुनेछ ।यो पर्व किन मनाउने त ? मूल प्रश्न यही हो । यससँगै होली कसरी मनाउने भन्ने उत्सुकता पनि जाग्नसक्छ ।होलीको परम्परा र संस्कृतिबारे हामीले धेरै पटक चर्चा गरिसकेका छौं । यसको आफ्नै धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व एवं मूल्य छन् । यद्यपी यसपटक भने हामी होलीलाई वर्तमान युग अनुसार र वर्तमान जीवनशैली अनुसार कसरी मनाउने भन्नेमा केन्दि्रत रहेर चर्चा गरौं ।किन मनाउने ? होली खासमा सप्तरंगी पर्व हो । यसको संकेत हो, जीवन पनि सप्तरंगी हुनुपर्छ । उत्साह र उमंगमय हुनुपर्छ ।अहिले हामी धपेडीमा छौं ।हामी विहान उठेदेखि जिन्दगीको रेसमा यसरी दौडिरहेका छौ कि,
आफैलाई बिर्सिएर वेग मार्दैछौ । करियर, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, वैंक व्यालेन्स, ऐश-आरमको चक्करमा हामीले आफ्नो जीवन-अस्तित्व मेटाउँदै गएका छौं । जीवन के हो ? कसरी जिउने ? यी हाम्रा प्राथमिकताबाट हट्दैछन् । यसको साइड इफेक्ट के भने, हामी तनावग्रस्त हुँदैछौं ।हामी दिमागमा प्रतिस्पर्धा, धपेडी, तनाव, इष्र्या बोकेर वेग हानिरहेका छौं । यहि कारण त हामीलाई विहान खानेबेला, राती सुत्नेबेला औषधीको डोज लिनुपर्छ ।वर्तमानमा हामी आफैलाई भुलेर जीवनबाट विमुख हुँदैछौं । यही कारण हाम्रो जीवन निरास एवं उदास हुँदैछ । फिका र श्यामश्वेत हुँदैछ ।यस्तो अवस्थामा जीवनलाई कसरी रंगीन बनाउने, कसरी रसपूर्ण बनाउने, कसरी रोमान्टिक बनाउने, कसरी रहरलाग्दो बनाउने ? यसको जवाफ हाम्रा चाडपर्व एवं उत्सवहरुसँग छ । वास्तवमा चाडपर्वको ध्येय भनेको समाजमा सद्भाव कायम राख्न, मानिसलाई उमंगित बनाउनकै लागि हो । यी चाडपर्वले हामीलाई उदासीबाट मुक्ति दिलाउँछ । एक्लोपनबाट मुक्ति दिलाउँछ ।होली त्यस्तै पर्व हो, जसले हामीलाई उमंगमय जीवनमा फर्काउँछ । होली रंगहरुको पर्व हो । यस अवसरमा एकअर्कालाई रंग एवं अबिर दलेर यो पर्व मनाइन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने, जीवन पनि यी रंगहरु जस्तै रंगीन हुनुपर्छ ।कुनैपनि चाडपर्वले निश्चित मौसम, हावापानी, भूगोललाई इंगित गर्छ ।रंगहरुको यो पर्व त्यहीबेला आउँछ, जतिबेला प्रकृतिमा हरियाली छाउन थाल्छ ।यसअघि जाडो याम हुन्छ । प्रकृति पनि रुखो एवं सुख्खा हुन्छ ।रुख-बुट्यानको पात झरेर उजाड हुन्छ ।
वायुमण्डलमा चिसो र सुख्खा हावा चलिरहेको हुन्छ । यो मौसमी अवस्थासँग हाम्रो शरीर र मनको खास कनेक्सन हुन्छ । त्यही कारण त जाडो याममा धेरैजसो चिन्ता एवं डिप्रेसनको रोगी बढ्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ ।प्रकृतिको यो स्वरुप फेरिदै गर्दा होली पर्व आउँछ । अर्थात जाडो सकिएर गर्मी बढ्न थालेपछि । आकास खुल्छ । यतिबेला विस्तारै प्रकृतिमा हरियाली छाउन थाल्छ । वायुमण्डलमा सितल हावा वहन थाल्छ । रुख-बुट्यानले पालुवा फेर्न थाल्छ । रंग बिरंगी फूलहरु हावामा तैरिन थाल्छन् । यस्तो मोहक मौसममा मन पनि यसै फुरुंग हुन्छ ।अतः प्रकृतिको यो सप्तरंगी पृष्टभूमीमा हामी किन रंगीन नहुने ? हामी किन उमंगित नहुने ?भनिन्छ नि, हामीले सधै प्रकृतिसँग लय मिलाउनुपर्छ । प्रकृतिसँगै नाच्नुपर्छ र प्रकृतिकै धुन अलाप्नुपर्छ । जब हामी प्रकृतिसँग एकाकार हुन्छौं, जीवनको धुन फेला पार्छौं । जीवनको माधुर्य प्रतिध्वनीत भएको अनुभूत गर्छौं ।होलीमा रंगहरुको पर्व मनाउनुको ध्येय हो, जीवनलाई सप्तरंगी बनाउनुपर्छ ।कसरी मनाउने ? अँ तपाईं होली कसरी मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? संभवत रंग एवं अबिर ल्याउनुहुन्छ । पानी, पिचकरी र लोलाको व्यवस्था गर्नुहुन्छ । पानी छ्याप्नुहुन्छ । रंग दल्नुहुन्छ । लोला हान्नुहुन्छ।अझ तपाईं किशोरवय वा युवाअवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईंले अनेक किसिमको रसायनले आफुलाई रंगाउनुहुनेछ । बेपरवाह बाटोमा हिँड्नेलाई वा आफुले देखे जतिलाई लोला हान्नुहुनेछ ।मौका परे पानीले निथु्रक्क भिजाइदिनुहुनेछ ।शरीरभर रंग दलेर, कपाल र अनुहारलाई बहुरंगी बनाएर सडकमा जत्था बनाएर हिँड्नुहुनेछ ।वाइकमा विन्दास हुँइकनुहुनेछ ।
वा छतमा बसेर लुकीलुकी बटुवालाई पानी छ्याप्नुहुनेछ ।अब सोच्नुहोस् त, के तपाईंले होली खेल्नुभयो ? कि अरुलाई सताएर त्यसबाट भद्दा मनोरञ्जन लिनुभयो ?होलीको मर्म, महिमा, महत्व र मूल्य एकातिर छ । तर, हामी होलीलाई भद्दा मजाक बनाइरहेका छौं । अतः होलीबाट हामीले असली उमंग लिन जानेकै छैनौ । त्यसो भए कसरी खेल्ने त होली ?हरेक चाड पर्व आपसी सद्भाव, सौहार्द्धता फैलाउने एवं कायम राख्ने मेलो पनि हो । हामीले यस्ता चाडपर्व मनाइरहँदा आफुले मात्र आनन्द लिएर हुँदैन, अरुलाई आनन्दित तुल्याउनु पनि पर्छ । यसर्थ रंगहरुको उत्सव मनाइरहँदा अरुलाई दुःख, कष्ट दिने होइन, आपसी खुसी साट्ने हो ।रंग कसरी हटाउने ? १. पेष्ट बनाउनुहोस् – बेसन, दही र बेसारको पेष्ट बनाउनुहोस् । यसपछि आफ्नो अनुहारमा १० मिनेट लगाएर छाड्नुहोस् र पनीले धुनुहोस् । तपाईंको शरीरमा लागेको रंग धैरै हदसम्म कम हुने गर्दछ ।२. आँटाको चोकर – आँटाको चोकरमा बेसन, बेसार मिसाउनुहोस् र अनुहारमा लगाउनुहोस । अनि सुकेपछि त्यसलाई हटाउनुहोस् । यसपछि आफ्नो छालाबाट सो रंग हराउँछ ।३. नीबूको प्रयोग – यदी तपाईं होलीको रंग हटाउन चाहनुहुन्छ भने नीबूको प्रयोग गर्न गइरहेको हुनुहुन्छ भने भूलेरपनि नगर्नुहोस् । नीबू लगाउँदा अनुहार रुखो हुन्छ ।४. तेलको उपयोग गर्नुहोस् – रंग खेल्नुभन्दा अगाडि तेलको उपयोग गर्नुहोस् । अनुहार, हातमा तेल लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको छालामा रंग मज्जाले लाग्न दिँदैन र सहजै हटाउनपनि सकिन्छ ।५. कपडा धुने साबूनको प्रयोग नगर्नुहोस् – कपडा धुने साबूनको भूलेर पनि प्रयोग नगर्नुहोस् । तपाईंले यसो गरेको खण्डमा अनुहार रुखो हुन्छ भने पोल्ने पनि हुनसक्छ ।
नारायणी र कोसीमा २०० यात्रु बोक्ने पानी…
थ्रिलर कथामा ‘पायल’ बन्ने
डुबेर तीन बर्षीय बालकको मृत्यु !
जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणप्रति पुरातत्व विभागको चासो